version 0.6.0 – အစာရှောင်ခြင်းမှပိုမြန်သွား
ဇူလိုင်လ 29, 2010 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု6comments
ဒီဗားရှင်းဟာအဓိကလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်, ဤလွှတ်ပေးရန်အတွက်အသစ်သောအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်. ဒါကြောင့်ပစ္စည်းများ၏စာရင်းကိုကျော်ရပေးနိုင်ပါတယ်
ယခုဘာသာပြန်ချက်များကိုပိုမြန်စေတယ်နှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်သောအော်တိုသုတ်ဘာသာပြန်ချက်များကိုအတွက်အထောက်အပံ့လည်းမရှိ, ယခင်က Transposh အမျိုးမျိုးအော်တိုဘာသာပြန်ချက် backend ကနေ scripts တွေကိုဖွင်ရှိတယ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ချက်များကိုရရှိရန်စာပိုဒ်တိုများအပေါ်တဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်း iterate လို, ယခုသူတို့အားဖန်ဆင်းတောင်းဆိုမှုတွေနံပါတ်များကိုလျှော့ချရေးအတွက်အတူတကွအုပ်စုဖွဲ့နေကြသည်, အဘယ်သူမျှမကပြင်ပ scripts ကို loading တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကရှုပ်ထွေးနက်နဲမှုကိုလျော့နည်းစေနဲ့အင်တာနက်အမြန်နှုန်းကို improve.
MSN ကို (Bing) ဘာသာပြန်တဲ့သူမရှိတော့ key တစ်ခုလိုအပ်ပါဘူး, ထိုသူတို့သည်မိမိတို့ API ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မည်နှင့် application တစ်ခုသော့ချက်ကို အသုံးပြု. ပြောင်းပါပြီအဖြစ်, ယခုသင့်အလိုတော်မှာ default အနေနဲ့ဘာသာပြန်ချက်အင်ဂျင်ကိုရွေးနိုင်သည်, ဒီအင်ဂျင်စက်ကဘာသာစကားများအတွက်မရရှိနိုင်ပါလျှင် – Transposh အခြားတစုံတယောက်ကိုသုံးစွဲနိုင်ဖို့စုဝေးစေမည်.
Transposh Google က Proxy ကိုယခု Google ထံမှဟာ Alpha အဆင့်ဘာသာစကားတွေအတွက်ဘာသာပြန်ချက် enable မှထည့်သွင်းထားပါသည် (နှင့်5အသစ်ဘာသာစကားကိုထောက်ခံ – အဘိဓါန် Armenian, အဘိဓါန် Azerbaijani, အဘိဓါန် Basque, ဂျော်ဂျီယာနှင့်အဘိဓါန် Urdu) – ဒီ proxy ကို plugin ကိုအတွင်း၌တည်ရှိပြီးနှင့်ဇာတ်ညွှန်းကိုသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုသင့်ရဲ့ server ကိုမှ translate google မှတောင်းဆိုမှုများကို redirects ဖြစ်ပါတယ်. ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနှောင့်နှေးသည် – ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ server ပေါ်မှာဝန်တိုးပွါး – နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အလွန်ကိုထောက်ခံအုကူံမဟုတ်ပါဘူး, အဖြစ်မကြာမီ Google ကအထွေထွေစားသုံးမှုထိုဘာသာစကားများဖြန့်ချိအဖြစ်ဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်. သင်တို့မူကား, Azeri ကလူတွေကိုသင့်ရဲ့ site ကိုဘာသာပြန်ဆိုရန်အရေးတကြီးလိုအပ်ရှိပါက, အနည်းဆုံးကိုသင်လုပ်နိုင်.
အဆိုပါ Transposh အမှတ်တံဆိပ်နှင့် website ရဲ့ backlink ယခုအခါ widget ကဖယ်ရှားခံရနိုင်, တကယ်လို့ဒီ option ကိုရွေးပါလျှင် – Transposh သာသင့်ထားသောစာမျက်နှာများပေါ်တွင်လက်ရှိကြော်ငြာအာကာသအချို့ငွေရှာဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်, ဒီငွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်, သင်သည်သင်၏ကြော်ငြာများကိုမှမဆိုပိုက်ဆံဆုံးရှုံးမခံလိုကြပါလျှင်, ကိုယ့် link ကိုစောင့်ရှောက်. စည်းကမ်းချက်များကိုဖတ်ရှုများမှာ ဒီမှာ.
အဆိုပါ translate အားလုံးခလုတ်ကိုလည်းပြင်ဆင်ထားသည့်ခဲ့ပါတယ်, နှင့်အသင့်ဖျော်ကို အသုံးပြု. အများကြီးပိုမြန်ဖြစ်သင့်.
bug ကိုပြင်ဆင်ခြင်းများ၏ခါတိုင်းလိုရှယ်ယာကဒီမှာ, ငါသူတို့အား bug တွေကြောင့်ပြုပြင်တာတွေကသူတို့ရဲ့အမြင်နှင့်မှတ်ချက်များနှင့်အလှူငွေများအတွက် Rogelio နှင့် Marko ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်. ကြိုးပမ်းမှု plugin ကို header ကိုအမှားမှာကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်, အလုပ်လုပ်လျှင်မူကားကျွန်တော်မျိုးပွားမခံနိုင်သည်သကဲ့သို့ငါတို့သည်မသိရပါဘူး, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ချောင်းကိုဖြတ်ကူး. ဒီလွှတ်ပေးရန်ဆိုးဆိုးရွားရွားသင့်အဘို့ကျိုးသည်ဆိုပါက, ဒီမှာမှတ်ချက်များမှာဒီသတင်းပို့ကျေးဇူးပြုပြီး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်မှတ်ဖန်တီး trac. bug ကြောင့်ငါတို့အပေါ် twitter အကောင့်ကို သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ရဲ့ facebook စာမျက်နှာ ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ဆဲလ်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်, လေပိုကောင်းလေမှာ3နံနက်. သင်အမြဲအရင်ဗားရှင်းမှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါသည်, ကျနော်တို့စေတနာစိတ်ပျက်ကြသည်မဟုတ်.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ, Software ကို Updates ကို အတူ Tagged: Bing (MSN) ဘာသာပြန်သူ, ဗိုလ်မှူး, ပိုဘာသာစကားများ, လွှတ်ပေး, မြန်နှုန်းအဆင့်မြှင့်တင်မှုများ, wordpress မှာ plugin
version 0.5.1 – ဒေတာဘေ့စတိုးတက်ပြောင်းလဲမှု
ဧပြီလ 11, 2010 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု2comments
ယခုအသစ် version ကိုကြာကြာထက်ပိုဘာသာပြန်ဆိုစာပိုဒ်တိုများနှင့်အတူတစ်ဦးအလွန်ဟောင်းနွမ်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ် 255 အက္ခရာများ. ဤပြောင်းလဲမှုအမြန်နှုန်းကိုယဇ်မပူဇော်ခဲ့, ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်ကိုက်ညီဖို့ဒဏ်ငွေဖမ်းယူနားဆင်အညွှန်းကိန်းအတူကတိုးမြှင့်. အဆိုပါဒေတာဘေ့စ code ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်အားဖြင့်ငါတို့သည် plugin ကိုအများကြီးပိုမြန်ပါတယ်လုပ်ဆောင်စေရန်တစ်လမ်းကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါပြီ (APC caching မသုံးခဲ့သည်အဓိကအားဖြင့်လာသောအခါ) ဘယ်မှာငါတို့သည်ယခုအုပ်စုသည်အများအပြားဘာသာပြန်ချက်မေးမြန်းချက်ကိုဒေတာဘေ့စဖို့တစ်ခုတည်း query ကိုသို့.
ဘာသာပြန်ချက် textarea tags များနှင့်အတူတစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့ bug ကိုလည်းမှကျေးဇူးတင်စကားဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည် Timo.
အမြဲလိုပဲ – သင့်ရဲ့ feedbacks ဘို့မျှော်လင့်.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, မြန်နှုန်းအဆင့်မြှင့်တင်မှုများ, wordpress မှာ plugin
version 0.4.2 – အဖြေ?
ဇန္နဝါရီလ 26, 2010 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 14 comments
ဖြစ်နိုင်စရာ – အဘိဓါန် Haitian ကနေဒီဗားရှင်းထောက်ခံမှုဘာသာပြန်ချက်မယ်? ဟုတ်ကဲ့
ဖြစ်နိုင်စရာ – Bing မှဘာသာပြန်ဆိုက auto generate ဖို့အသုံးပြုလိမ့်မည် Translate နိုင်သလား? ဟုတ်ကဲ့
ဖြစ်နိုင်စရာ – သငျသညျအလွပြီးစီးခြင်းနှင့် gzipped သည့်အခါ 1.5k မှ script ကို size ကိုလျှော့ချခဲ့ပေ (Added Functions တွေနှင့်အတူ)? ဟုတ်ကဲ့
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: Bing (MSN) ဘာသာပြန်သူ, အသေးအဖွဲ, ပိုဘာသာစကားများ, လွှတ်ပေး, မြန်နှုန်းအဆင့်မြှင့်တင်မှုများ, wordpress မှာ plugin
version 0.4.1 – သင့်ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်ပိုမိုလျှင်မြန်
ဇန္နဝါရီလ 13, 2010 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု2comments
အလုပ်ကိုလည်း .css files တွေကိုအကောင်းဆုံးအပေါ်ပြုလေ၏, ပါဝင်နိုင်၏နံပါတ်တစ်လျော့ချရေးနှင့်အတူပုံမှန်အဝစ်ဂျက်ကိုအသုံးပြုမှုကိုအောကျ၌သာအသုံးပြုခဲ့တစျဖိုင်ကိုရှိလိမ့်မည်ဒါကြောင့်.
သင်တို့အဘို့အဘယ်အရာကိုမျှချိုးခဲ့လျှင်, ဆိုကို browser သို့မဟုတ်ဆောင်ပုဒ်အပေါ်. ရုံကျွန်တော်တို့ကိုသိစေ.
ကံမကောင်းစွာ, ဒီအလွှတ်ပေးရန် jQuery များအတွက်အထောက်အပံ့ကိုထည့်သွင်းမည်မဟုတ် 1.4 ဤအချက်မှာအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးပေးသော jQuery UI ကို tabs များအတွက်တစ်ဦး bug ကိုအဲဒီမှာဖွင့်အဖြစ်, jQuery UI ကိုရဲ့နောက် version ကိုတိုက်ရိုက်ဝင်တခါကျနော်တို့ဖြစ်နိုင်အဆင့်မြှင့်တင်ပါလိမ့်မယ်.